GV Mpisolovava · Desambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny GV Mpisolovava tamin'ny Desambra, 2010
Nepal25 Desambra 2010
Amerika Latina25 Desambra 2010
Ny fomba fiasan'ny fanivanan'ny ICANN TLD afenina any anatin'ireo antsipirihan'ny toro-lalàna ho an'ny mpirotsaka
Fitsipika20 Desambra 2010
Ao anatin'ireo antontan-taratasy miavosa miresaka ny politika & ny lalàna, dia mety hila fitrandrahana kely ny fitadiavana ireo tena resaka marina ao anatin'izany. Tsy misy hafa loatra amin'io fomba fijery ny Dika Faran'ny boky toro-làlana ho an'ny Mpirotsaka nataon'ny ICANN's gTLD ary maro amin'ireo teboka tena manan-danja no afenina any...
Shina: Tsy misy “seza foana” nahazo alalana hiseho aterineto
Shina11 Desambra 2010
Tsy afaka nanatrika ny lanonana Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana tany Oslo, Norvezy, natao omaly i Liu Xiaobo sy ny vadiny. Nanokana “seza foana” (tsy misy olona) ihany ny Komitin'ny Loka Nobel ho toy ny fanamarihana hoe nanatrika teo i Liu. Ho mariky ny fanohanan-dry zareo an'i Liu sy hanapariahana...
Iràna09 Desambra 2010
Tonizia08 Desambra 2010
Nitsoratsoraka tamin'ireo Cables (Avy amin'ny mpandika: ndeha hatao hoe "hafatra maika") farany Wikileaks nalefan'ny Masoivoho Amerikana ary nanolotra tranonkala vaovao hemerenana mamoaka sy miady hevitra momba ireo ampamoaka mikasika ny firenen-dry zareo ny mafàna fo Toniziana. i Nawaat no namokatra ny Tunileaks, ora iray taorian'ny nipariahan'ireo hafatra nalefan'ilay tranonkala tamin'ny...
Hafanàm-po nomerika07 Desambra 2010